Shaqooyin horseeday dhimashada Muslimiin badan. | HimiloNetwork
Shaqooyin horseeday dhimashada Muslimiin badan.
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka August 19, 2017	0 227 Views
Doha (Himilonews) – Imaatinkii Donald Trump dhulka Boqortooyada Sucuudi Carabiya iyo heshiiskii hubka ee qiima ahaan ku kacayay 460 billion oo dollar, waxa hubanti ah iney shaqo abuur u noqdeen kumanaan reer Mareykan ah dhawrka sano ee soo socota.
Kaliya Mareykanka ma aha dawladda heshiis hub ku kacaya boqollaal milyan oo dollar la gaartay Boqortooyada Sucuudiga iyo dawladaha Carabta balse dhammaan dunida Galbeedka, dawladaha soo saara hubka iyo kuwa dhoofiyaba waxa ay tartan ugu jiraan sidii mid walbaa uu u noqon lahaa kan hubka ugu soo dhoofiska badan Sucuudiga si tobanaan kun oo shaqo ugu abuuro mawaadiniinta dalkiisa.
Haddii aan dib u laabanno xoogaa yar kuna sumadeysan duulaankii Saddaam Hussein ee Kuweit, waxaan heli karnaa bilawga dunida Carabta gaar ahaan Khaliijka iney nooleeyeen shirkadaha iyo suuqyada hubka ee caalamka, waxana arrinkaa uu isku rogay dhacdadii 11 September kaddib ganacsiga ugu badan ee shaqo abuur iyo dakhli dhalinba u noqday dawladaha soo saara hubka.
Tirada hubka ee lagu adeegsaday Afgaanistaan waxa loogu yeeray la-dagaalanka Daalibaan iyo Al-qaacidda, waxay khubarro badan oo Mareykan ahi ku sheegeen in xukuumadda Washington ay u istcmaashay nuuc walbo oo bambooyin iyo hub keydsanaa ah oo aan horey loo adeegsan tan iyo dagaalkii Vietnam, halkaas oo ay ka mid yihiin ridmooyinkii waaweyn ee B-52, kuwaas oo loogu magac daray ‘Duqeyntii Roogga’ oo micnaheedu yahay in dhulka roogga ahi Bambooyinkaan taako-taako iyo dhudhun-dhudhun u qodo, si cagta loo mariyo gabi ahaan uun walbo oo nool kaddibna ku noolaanshiyaha goobtaas ay noqoto mid suurtagal-nimada ka fog.
Dr. Asif Drackovic oo ku xeel dheer Uranium-ka ayaa shaaciyay mar uu booqasho ku tagay Afganistan kaddib iney muujinayaan nudayaal uu ka soo qaaday gobollo si xun loo duqeeyay in heerka Uranium-ka ku jira carrada iyo biyaha xiiliyada qaar uu yahay mid ka sareeya boqol laab heerka caadigga ah, taas oo ka dhigan in ruux walba oo ku nool dhulkaas u nugul yahay cudarro la yaab leh oo xaqiiq ahaan loo arkay. Halkaas oo ay ku baaheen nuucyo cusub oo ka mid ah Kanserka iyo cudurro kale oo wali khubarada caafimaadku magac u baadi goobayaan.
Dhacdooyinkaas waxay ka dhaceen Afgaanistaan, Ciraaq gaar ahaan magaalada Faluuja iyo Gaza oo ah dhulka reer Falastiin. Haddana waxa ay ka dhacayaan kuwa la mid ah dalalka Suuriya, Yaman iyo Liibiya. Waana tan keentay in dagaallada dunida ka dhacaya ay haatan ku soo uruureen dunida Carabta. Teeda kalane ay sare u kaceen warshadaha sameeya hubka ee dawladaha Galbeedka, soo noolaan xooganna laga dareemo suuqyada shaqada iyo shaqo abuurka dhalinyarada si loo soo saaro hub aakhiritaankii gumaada Muslimiinta laguna baabi’iyo dalalkooda.
Dhammaan hubka lagu adeegsado dalalka Muslimiinta laguma tiriyo nuucyadii hore kumana koobna dil iyo burburin dhuleed oo kaliya. Balse maadooyinka laga sameeyay ayaa ah kuwa baabi’inaya nolosha kumanaan sano gobollada lagu burburinayo iminka.
Haddii bambooyinkii iyo miinooyinkii la aasay dagaalkii labaad ee dunida ay wali yihiin kuwa galaafta nolosha shaqsiyaad dunidan ku nool iskaba daaye horumarkaan ballaaran ee ku dhacay walxaha laga sameeyo hubka oo ay ka mid tahay Maadada Uranium-ka. Bal qiyaas sida xoolaha Muslimiinta u yihiin kuwa shaqo u abuuraya kuwa aan Muslimiinta aheyn haddana hubkii lagu sameeyay loo soo dhoofiyo iyaga si ay isugu dilaan. Ma garanayo sida ay taariikhdu u xakameyn doonto dhibaatadaan!
Qore: Axmed Mansuur.
W/T: Ismail Mohamed Samatar
Next: Haweeney gudaafad ka dhex heshay lacag dhan $180,000
Dugsiyada Spain oo Muslimiinta baraya Qur’anka
Nadaafiso – si ay u muujiso Nadaafadda Musqusha – biyaha ka cabta Kortagga.
Turkigu wuxuu isku ballaarinayaa soohdimadii Khilaafada Islaamka